Ukukhethwa kwamabhoti asebusika ococekileyo mabhinqa kufuneka kuhanjiswe kuwo wonke uxanduva. Kukho iingcebiso kunye neemfihlo malunga nendlela yokukhetha iibhola ezibusika ezilungileyo, esiza kukuxelela namhlanje.
Okokuqala, sifanele sijonge kwizinto ezivela kuyo inxalenye ephezulu yeebhuthi kunye neyangaphakathi.
Izicathulo ezintle kakhulu ze-suede. I-Matte isigxina sinika le nto ibhenkco ekhethekileyo. Ukuba uhamba kakhulu ngemoto, ngoko uthenge ngokukhuselekileyo ezi bhotile. Kodwa ukuba uhlala uhamba ngezitalato ebusika okanye kwimimoya emibi, izicathulo ze-suede ziza kutshabalalisa imbonakalo ekhangayo ngokukhawuleza, kuba le nto ayizinzileyo kwiikhemikhali zeprato, kwaye kunye nezicathulo eziqhelekileyo kunye nokukhangela izicathulo ezinjalo zichasene. Kwimeko nayiphi na imeko, ukunyamekela kakuhle kunye nokujonga kakuhle kuya kwandisa kakhulu ubomi beembadada ezivela kwi-suede.
Izinzuzo zesikhumba sangempela ziyabonakala. Xa kuthelekiswa nomsebenzi, kunqabile ukugqoka, kunomgangatho ophantsi wokuqhuba umthambo (imilenze iya kufudumala), imilenze izakukhupha ngaphantsi kwayo. Ngesinye isikhathi isikhumba esilungileyo sinobunzima ukuhlula kwiziko lesikhumba. Ukuba unako ukufumana umda ongenagqityiweyo wezinto eziphathekayo - uyihlolisise kakuhle. Kwisibhakabhaka esingokwemvelo akukho nto ingabonakali kwindwangu yembumba, ingummiselo waloo nto phambi kwezicathulo ezivela kozhzama.
Izibhotshi - iibhotile zasebusika kunye noboya engxenyeni yangaphandle - ziye zadume ngokugqithiseleyo kwimizuzu emibini edlulileyo. I-Fur inikeza ezi bhotile into ekhethekileyo, engenakulinganiswa. Esi sihlangu sinokufumaneka kwisithende okanye ngaphandle kwayo.
Ukuba ukhetha iingubo ze-mini kunye nejee ezinxibileyo kwiingubo, ke uya kusebenzisa iibhuthi. Ezi zide, ngaphezu kweedolo, iibhotile zifuna iingubo zakho zokugqoka kwaye awuyi kubambathisa nayiphi na impahla, ngoko akunakwenzeka ukubawabize izihlangu. Awufanelanga, umzekelo, ukufaka iingubo ezide okanye iidrafti ezibanzi, njengoko zivala imilenze yazo ngokubanzi kwaye ukudibanisa okunjalo kungenanto. Kwakhona, ii-jackboots zivame ukuba nesithende esiphezulu kakhulu, nto leyo engabonakaliyo kula ma ntombazana achitha ixesha elide "ezinyaweni" okanye ekuqhubeni. Ezi zibhotshi zikwindawo yecala, kodwa ngokubonakala ngathi zilahlekelwa zizibhothi ezinezithende eziphezulu.
Ukufaneleka kweebhothi kufuneka kuqale ngokuma, ukunyathela, ukuzama - nokuba kukho i-boot apho kukho isihlangu esitsha, ingaba iinyawo azithathi phantsi nokuba zinyana zihlala kwizwane. Ukuba akunjalo, ukuzaliswa kunye nobukhulu beebhotile kufanelana nawe. Kukho umbono oqhelekileyo ukuba amabhoti ebusika kufuneka abe bubungakanani obukhulu kunakho. Oku kuyingxenye echanekileyo. Ngezicathulo ezinamathele kakhulu, ubomvu ngaphakathi buyabanjwa, kwaye alugcini ukushisa ngokufanelekileyo, kodwa emva kokuba zonke izicathulo ziphelelwe ixesha, izicathulo ezikhululekile ziya kukhululeka. Ukukhethwa koxinzelelo lweebhotile kufuneka kuxhomekeke ekubeni unxiba iisokisi ezinamaqanda oboya okanye iimboli ze-kapron ezincinci.
Ukuhlolwa kwezicathulo: iibhola ezilungileyo okanye akunjalo.
Izinto ezifanelekileyo kwiindawo zangaphakathi zeebhotile zasebusika kukuba, ngokuqinisekileyo, ubumnyama bemvelo. Unemivuzo engenakukhunjulwa ngaphezu koboya obufakelwayo: imilenze ayiyi kuthukuma kwaye ifumaneke emanzi, ukubonelela ngomoya owaneleyo (imilenze iya "iphefumula"), ngcono ukugcina ubushushu. Ubumnandi bokufakelwa ngumntu onqatshelwe zonke ezi mpawu.
Ukumisela umgangatho wobomvu, kufuneka ubeke ingqalelo kule miqondiso elandelayo - ubomvu obunemvelo obukhulu kwaye bukhulu, ukuba ucinezelwe - ngokukhawuleza ulungele. Yenza i-nap ngeminwe yakho kwaye uhlolisise ngokucophelela inkcazelo apho izinwele zifumaneka khona: ubumnyama bemvelo buya kuba lukhuni olubonakalayo, kunye nokufakelwa kwengqungquthela-umsila. Musa ukukholwa ngamazwi omthengisi, oqinisekisileyo ukuba isiseko sesisisi "ngulobu buchwepheshe obutsha." Isalathiso sincinci kunene kunesikhumba, kwaye kwiibhuthi ezinobumba obubonakalayo, iinyawo ziza kukhululeka ngokukhawuleza.
Kwakhona, ubuqili benzi abasebenzisa ubumnyama bemvelo kungekhona kuyo yonke indawo yangaphakathi yeebhuthi, kodwa kuphela phezulu, uhlanganiswe noboya obunobumba obukuloo ndawo. Ngenxa yeso sock, ukufudumala kwezibhotshi zasebusika kuya kuba ngaphantsi.
Umbane, imihlobiso yeebhuthi.
Ngoku qwalasela ngokukhawuleza umbane - uvale uze uvule amaxesha amaninzi. Umbane kufuneka udibanise ngokulula kwaye ungenayo i-hitch, akufanele ufumane umbane okanye uboya obunzima. Kwakhona ngaphakathi, umbane ngokwawo kufuneka ugutywe ngetsimbi ekhethekileyo, eya kuqinisekisa ukulondolozwa kobushushu. Ukuba ufuna ukukhetha iibhothi ngokukrazula, ngoko kukugqithisa ukugqithisa kwintsimbi, kulula ukuba ulungele ukuphakama kokuphakama kwezibhotshi, okwenza kube lula ukuwagqoka.
Iingubo oza kuzinxiba kuzo zidlala indima. Ukubhoboza izibhokhwe kunye nezikhankaso kwiibhuthi kunokuthi, ukuba uceba ukubambathisa ngeengubo okanye iifestile ezimfutshane. Yaye ukuba iingubo zakho ezibalulekileyo ebusika - ziyi-bants okanye i jeans, ke ezi zigulo, okokuqala, aziyi kubonakala, kwaye okwesibini, ziyakwazi ukubambalela okanye zishiye. Hlola umgangatho wee-rivets, uzama ukuphazamisa uze uwaphule - kufuneka abambe ngokuqinile, njengokuba wathululwa. Yaye iibhothi kufuneka zingabi namanqatha omnatha, ebonisa umgangatho ophantsi wokuvelisa.
Nika ingqalelo ekhethekileyo kwintsimi yeebhotile zakho. Inokuthi ifakwe kwi-glue okanye ngentambo, kwaye iyakunjelwa, yenze ipheleleyo kunye neebhuthi. Ubungakanani bodwa buyinto ebalulekileyo: inqabileyo yedwa, ifudumele iibhothi ziya kuba. Ngokuqinisekileyo, iibhothi zamabhinqa ziba nobukhulu obuncinci bomhlaba kunabesilisa, kodwa kufuneka kuqatshelwe ukuba kwiibhuthi ezincinci (ngaphantsi kwe-1 cm), iinyawo aziyi kuba nobushushu. Iseshoni esinqabileyo kakhulu esenziwe ngeerubber, i-polyurethane, i-polyvinylchloride nayo isetyenzisiweyo - ezi zinto azifumani zimanzi kwaye zifanelekile kwiimeko zemozulu zasebusika.
Indlela yokukhetha izicathulo ezikhululekile?
Iimfihlelo eziphambili zempilo
Isifo sesibindi sesibindi kunye nekhefu
Iimbongo ezintle kwiSonto lePalm. Indlela yokuvuyisana ngevesi ngePlani yePalm. Mfutshane-inkondlo kubantwana malunga neSonto lePlanga
Imveliso equkethe i-vitamin A
Iibhulabhwele zebhondi zentloko: iintlobo ezisisiseko kunye neenjongo
IHoroscope yenhlanhla yiveki kaNovemba 20-26, 2017
Ipensela ye-Whitening Bliq Pen - yintoni efanelekileyo kwaye yintoni eyingozi?